ATN: အမှတ်တမဲ့ သိမ်းဆည်းထားမိသော အမှတ်တရများ
ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြန်မာပြည်
သူ့ထက် ၈ နှစ် ငယ်သော်လည်း မိဘများအချင်းချင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်နေလေသည်မို့ သည်ကောင်မလေးနဲ့ သူကလည်း သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေရသည်လေ။ သည်တော့ သူကသာ ဆရာဖြစ်နေသော်လည်း သူ့ကို ဘယ်တုန်းကမှ ဆရာ မခေါ်ခဲ့ဖူးသော သည်ကောင်မလေးကိုလည်း အပြစ် မဆိုသာ။ နှစ်အိမ့် တအိမ်လို အကြောင်းသိတွေ ဖြစ်နေခဲ့သော မိသားစု နှစ်ခုဖြစ်သည်မို့ လူငယ်ဘာဝ သူ ဆိုးသွမ်းခဲ့ဖူးသည်များကိုလည်း သိထားသော သည်ကောင်မလေးက တခါတခါလည်း သူ့ကို - လူဆိုးကြီး - ဟုလည်း နောက်ပြောင် ခေါ်တတ်သေးသည်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးက သူ့ကို ဆရာ-ဟု ခေါ်နေကြသည့် သူ့ စာသင်တန်းမှာ လာတက်ရင်း သူ့ကို လူရှေ့ သူရှေ့မှာ သည်ကောင်မလေးက - ကိုကြီး - ခေါ်သည့်အတွက် - ဆရာ - ခေါ်ရန် လူကွယ်ရာအချိန်မှာ သူ ငေါက်ငမ်းခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအခါ ဂျစ်တီး ဂျစ်ကန်မျက်နှာဖြင့် - လူဆိုးကြီး အကို ဆရာ - ဟု အကျယ်ကြီး အော်ကာ သူ့ရှေ့မှ လွယ်အိတ်ကလေး ဆွဲကာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ဖူးသော သည်ကောင်မလေး အပေါ် သူ့ရင်ထဲမှာ သံယောဇဉ်တွေ ထူထပ်နေခဲ့ဖူးသည်ကို သူ အမှတ်ရသည်။
ခုတော့ - လူဆိုးကြီး အကို ဆရာ - မှာ ဒဏ်ရာများနှဲ့ အလူးလူး အလိမ့်လိမ့်ဆိုသည်ကို သည်ကောင်မလေး သိပါလိမ့်မည်လား...
၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၈) ရက် နံနက် (၁၀) နာရီ
(၁၆) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြန်မာပြည်
၀ိုင်း ကျူရှင်ဆရာအဖြစ် ၈ တန်း - ၉ တန်း - ၁၀ တန်း ကျောင်းသားများကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားနေခဲ့သော သူ့နေ့ရက်များ ကုန်ဆုံးလေပြီ။ သူ့ ၁၀ တန်း စားပွဲဝိုင်း အတန်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အားလုံးကို အိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်သည်။ သူ့စားပွဲဝိုင်းကျူရှင်များ အားလုံးကို အပြီးတိုင် သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူ ပြောလိုက်သည်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအားလုံး အိမ်ပြန်ကြပြီ။ သည်ကောင်မလေးတယောက်သာ စားပွဲဝိုင်းမှာ ပေကပ်ကျန်နေရစ်သည်။
ကိုကြီး ဘာလို့ အဲလို လုပ်တာလဲ....
စားပွဲမှ ထိုင်ရာမထ မော့ကြည့်ရင်း သူ့ကို ပေကပ်ကပ် မေးနေသော မျက်နှာလေးတခုကို အဖြေမဲ့စွာ သူ ငေးကြည့်နေမိလေသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်
သေ့ဘောဘိုးရွာ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်
အိပ်မက်မက်နေသလိုလို သူ့ကိုယ်ကို သူ ပြန်လည်တွေ့ရှိမိသည့်အခါ တောနက် တခုအတွင်းမှာ ဖြစ်လေသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ထဲရှိ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်အနီးက မှောင်ခိုဈေးကလေးတခု၏ လမ်းအလယ်မှာ သူ လျှောက်နေမိပါသည်။ သို့သော်လည်း သူ တယောက်တည်း မဟုတ်။ ထောင်ချီနေသော လူငယ်များ အကြားမှာ...
၁၉၈၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၆)ရက်
သေ့ဘောဘိုးရွာ၊ သေ့ဘောဘိုးစခန်း ထောက်ပံ့ရေးရုံး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်
မိုးများ တဖွဲဖွဲကျနေသည့် မနက်ခင်းကို သူက ပျင်းရိငြည်းငွေ့စွာ ကြည့်နေစဉ်လေးမှာပင် အကောက်ဂိတ်ဖက်မှ တက်လာသည့် မိန်းကလေး (၃) ယောက်ကို သူ လှမ်းကြည့်နေမိသည်။ တဖြည်းဖြည်း နီးနီးလာသော အရိပ် (၃) ခုက သူ့ ရုံးအရှေ့သို့ ရောက်ရှိ ရပ်တန့်သွားသည့်အခါ မိုးရေများနှင့် ရွှဲစို စုတ်ပြတ်နေသည့် မျက်နှာ ၃ ခုကို သူ သေချာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ သည်အခါ မျက်နှာလေး တခုက သူ့ကို ထခုန်မိမတတ် အလန့်တကြား ဖြစ်သွားစေသည်လေ။
- ဟာ... ညီမလေး.... -
- ကိုကြီး... -
မယုံကြည်ချင်စရာ တွေ့ဆုံမှုကို သူ အံ့သြနေလေသည်။
- နင်ဘယ်လို လုပ်ရောက်လာတာလဲ... ညီမလေး - သူ မေးမိသည့်အခါ...
- ကိုကြီး ရှိတယ် ကြားလို့ လိုက်လာတာလေ... - ဆိုသော အဖြေအပေါ်...
- နင် ရူးနေလား... - ဟု စိတ်တိုစွာ အော်ငေါက်မိသည့်အခါ...
- သမီး ရူးတာ မဟုတ်ဘူး... ယုံကြည်နေတာ... - ဟု ထော်လန်နေသော နှုတ်ခမ်းပါးလေးများကိုလည်း သူ ကောင်းကောင်း အမှတ်ရနေခဲ့ပါသေးသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ
သေ့ဘောဘိုးစခန်း၊ ဒူးပလယာခရိုင်၊ ကရင်ပြည်နယ်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး ခေါ် ABSDF ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီ။ သူသည်လည်း တပ်ဦးမှ အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီ။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ရွေးချယ်မိကြသည့်အလျောက် စစ်သင်တန်းပေါင်း မြောက်များစွာကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြရလေသည် မဟုတ်လား။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ
အထူးစစ်ဆင်ရေး သင်တန်းစခန်း၊ မဲကလချောင်းကမ်းနံဘေး၊ ၊ ကရင်ပြည်နယ်
- အေကေ... -
- ဟုတ် ... ဗိုလ်မှူး... -
- မိန်းကဲမ့်ကို ငှက်ဖျား လူနာတယောက် သွားပို့ရမယ်... ရဲဘော် တယောက်ယောက်နဲ့ ခင်ဗျား ထမ်းပို့လိုက်ပါ... -
- ဟုတ် -
နောက် မိနစ် ၃၀ အကြာ... လူနာကို စစ်ပုခက်ဖြင့် ထမ်းသယ်လာသည့်လမ်းမှာ သည်ကောင်မလေးနဲ့ သူ့အဖော် တယောက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လာနေသည်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်....
- ဟဲ့... ဘယ်သွားမလို့လဲ... -
- အာ... ကိုကြီး... ဖျားနေတယ် ဆိုလို့... သမီး... လာတွေ့တာ... ခုတော့... ကိုကြီးက သူများကို ထမ်းလို့... -
- ငါ ဖျားနေတယ်... ညည်းကို ဘယ်သူက ပြောလို့လဲ... -
- ကိုနေဦးကြီးလေ... -
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကျေနပ် ကြည်နူးနေမိသည်...
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁) ရက်
- ညီမလေး... ကိုကြီး လာနှုတ်ဆက်တာ... -
- သမီး... သိတယ်လေ... -
- မသေရင် ပြန်တွေ့မယ်... -
- အဲလို မပြောနဲ့လေ... ကိုကြီး...
နေဦး... အမှတ်တရ... ကိုကြီး မသွားခင်... စစ် အင်္ကျီချင်း လဲချင်တယ်... -
- လဲပေါ့... -
ထိုနေ့က အပြန် အလှန် လဲလှယ်ခဲ့သော စစ်အကျီ၏ ဘယ်ဖက်ရင်ဘတ်နေရာမှာ ဘောပင်အပြာရောင်နှင့် ကောင်မလေး ရေးထားခဲ့သော စာတမ်းလေးကို ယခု သူ လွမ်းပါသည်...
Love me ever... Forget me never...
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၆) ရက်
ဘိုကာရာတွန်မြို့၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အလုပ်က သူ ပြန်ရောက်လာသည်။ သူ အလုပ်လုပ်ရာ စတိုးမှ ဆွဲချလာသည့် ကိုရိုနာ ဘီယာ (၆)လုံးကဒ်ကို ရေခဲ သေတ္တာထဲ ထည့်လိုက်သည်။ ရေမိုးချိုးပြီးနောက် ကိုရိုနာ တလုံးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး သူ့ကွန်ပြူတာ စားပွဲမှာ ထိုင်လိုက်သည်။ ဘာလိုလိုနှင့် သူ ဘလော်ဂါတယောက် ဖြစ်လာသည်မှာ (၆) လ ကျော်နေပြီ မဟုတ်လား....
အလုပ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ပေါ်လာသည့် အတွေးစတွေကို ဆွဲယူရင်း ကဗျာတပုဒ် ရထားသည်ကို သည်နေ့ညတော့ သူ့ ဘလော့အပေါ် တင်ရဦးမည်။
ဘလေါ်ဂါဒေါ့ကွန်းကို ဖွင့်လိုက်ရင်း သူ့ ဘလော့စာမျက်နှာကို ကြည့်လိုက်မိသည်။ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ အသစ် တင်ထားကြသည်လဲ...
သူ ဖတ်နေကျ ဘလော့တွေကိုတော့ သူ့ဘလော့လေး၏ ဆိုဒ်ဘားမှာ သူ လင့်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ဆိုဒ်ဘားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြည့်လိုက်မိသည်။
ဟား... နွေနှင်း-ဘလော့မှာ... အသစ်တင်ထားပါ့လား... ရခဲ့ဖူးသော ပိတောက်တခက် - ဆိုပဲ...
နွေနှင်း-ဘလော့လေးက အရောင်စုံလှသည်။ သုတ-ရသ စာစုံသည်။ ဆောင်းပါးတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ ၀တ္ထုတိုလေးတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ။ စာအရေးကလည်း ကောင်းလှသည်။ သူနှစ်ခြိုက်သည့် ဘလော့ တခုပေမို့ သူ့ဘလော့မှာ လင့်ချိတ်ထားမိခြင်း ဖြစ်သည်။
နွေနှင်း-လင့်ကို သူ့ မောက်စ်ဖြင့် ကလစ်လိုက်သည်....
ပိတောက်ပန်းခက်ကလေးတခုကို ဓါတ်ပုံတပုံဖြင့် တင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ပိတောက်ပန်းတွေ ပေးခဲ့ဖူးတာ သတိရတယ်...
အဲသည်နေ့က ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့နဲ့ ရာသီဥတုက လွမ်းစရာတော့ အကောင်းသား... ဘာကို လွမ်းလို့ လွမ်းနေမှန်းမသိ... လွမ်းလို့ ကောင်းနေတုန်း... ပိတောက် တဆုပ်... လက်ဆောင်ရခဲ့ဖူးတာ... ဘ၀မှာ ... မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတယ်... အဲဒီ ပိတောက်ပန်းတွေ... ဘယ်က ရခဲ့သလဲလို့လည်း သူ့ကို မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး... ကိုယ်တိုင် တက်ခူးလာခဲ့တာလား... (သူ့ကို ကြည့်ရတာ သစ်ပင်ကော တက်တတ်ပါ့မလားလို့... )... သူများကို တက်ခူးခိုင်းခဲ့တာလား... ပိုက်ဆံပေးပြီး... ၀ယ်ခဲ့တာလား... (သည်လို ... တောထဲ တောင်ထဲမှာတော့... ပိတောက်ပန်း ရောင်းမယ့်သူ... ဘယ်လိုမှ မရှိဘူး... သေချာတယ်...) ဘယ်လိုပဲ ရလာရလာပါ... ရှားရှားပါးပါး ဒေသမှာ... ကိုယ့်အတွက် အမှတ်တရ... ယူလာပေးတဲ့အတွက်... ထာဝရ အမှတ်တရ ဖြစ်နေလေတော့တယ်...
အပွင့်ဝါ၀ါ သေးသေးလေးတွေနဲ့ စိမ်းစိုပြီး ဖားဖားဝေနေတဲ့ ပိတောက်ရွက်တွေ... အဲသည် ပိတောက် အဆုပ်ကလေးတွေကလေ... သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ထားတာကို မဟုတ်ပဲနဲ့... သဘာဝကျကျ... အရမ်းကိုလှနေလိုက်တာ... ပြန်တွေးမိတိုင်း... ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးတယ်...
အဲသည် ပိတောက်ပန်း တခက်လောက်... ရင်ထဲမှာ ချစ်ခင် နှစ်သက်ရမယ့် ပန်းမျိုး... ဘ၀မှာ နောက်ထပ် မတွေ့ခဲ့တော့ပါဘူး...
အဲသည်တုန်းက ... ဘာရာသီလဲ... ဧပြီထဲမှာပဲလား... အချိန်တွေ... လတွေ... နှစ်တွေ... သိပ် မစဉ်းစား... အမှတ်မထားမိခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို... သူ့ဘာသာသူ... ကုန်ဆုံးနေစေခဲ့ချိန်တုန်းကဆိုတော့...
အဲသည် ပိတောက်ခက်ကလေးကို... သူ... ကိုယ့်ကို... ဘယ်လို ပေးခဲ့တယ်.. ဘယ်တုန်းက ပေးခဲ့တယ်... ဆိုတာ... သေချာကို မမှတ်မိတော့ဘူး...
ဒါပေမယ့်... အဲသည့် ပိတောက်ခက်ကလေးကိုမြင်ပြီး အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့မိတာကိုတော့ သိတယ်... ကျေနပ်နှစ်သက်စွာ... ပြုံးပျော်နေခဲ့မိတာကိုလည်း... သတိရတယ်...
သူ့ကိုရော ပိတောက်တခက်အတွက်... ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့ဖူးသလား... ကိုယ် မမှတ်မိ...
သူ့ ပန်း ပိတောက်လေးတွေကိုယူရင်း... ဟန်ဆောင် ပန်ဆောင် ကိုယ် ရှက်ပြခဲ့ဖူးသလားတောင် ကိုယ် မမှတ်မိ...
ပိတောက် တခက်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်...
သူ့ရင်တွေ တဒုန်းဒုန်း ခုန်သွားတော့သည်.....
ဟိုးလွန်ခဲ့သည့် (၁၉) နှစ်က သင်္ကြန်တွင်း မဟုတ်သော်လည်း အဲသည် တောနက်နက်ကြီးထဲမှာ လာပွင့်နေသည့် ပိတောက်ပန်းများကို ညီမလေးအတွက် တက်ခူးပြီး လက်ဆောင် ပေးခဲ့ဖူးသည်ကို သူ သတိရမိသည်။
ခုတော့ ကွဲကွာခဲ့ကြသည်မှာ အနှစ် (၂၀) ပင် ပြည့်တော့မည်မဟုတ်လား...
နွေနှင်း-ဘလော့စာမျက်နှာမှာ သူအသည်းအသန် လိုက်ရှာနေမိသည်က အီးမေးလ်လိပ်စာ....
သည့်နောက်မှာတော့ ဖန်မျှင်အလင်းတန်းထဲမှာ သူတို့ နှစ်ဦး ပြန်ဆုံကြသည်...
ဂျီတော့ခ်ပေါ်မှာ... စွန်းထင်းသွားခဲ့သော မျက်ရည်စ တချို့ကို... သူတို့ နှစ်ယောက် အပြန်အလှန် သုတ်ပေးခဲ့ကြဖူးသည်...။
သည်လိုနှင့် ဟိုး လွန်ခဲ့သော (၁၉) နှစ်က မပြောခဲ့ဖူးဘူးသော စကားများကို ဖန်မျှင် အလင်းတန်းတွေကြားမှာ သူတို့ နှစ်ဦး ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
သက်တံတစင်းကို နှစ်ယောက်သား ဖန်ဆင်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ထို အချိန်ကာလများကို မည်သို့ သိမ်းဆည်းထားရမည်လဲ...
သို့သော်လည်း စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်သော ဘ၀မှာ... လူသားဆန်ခဲ့မိသော သူတို့ နှစ်ဦးသည် ဆက်လက်ပြီး လူသားဆန်ကြရဦးမည် မဟုတ်လား...
သူတို့ နှစ်ဦးသည် (ဂျူး၏စာကို ခေတ္တ ငှားသုံးရလျှင်... ) ကြိုးနှင့်သီကုံးထားရန် မလိုသော ပန်းကလေး နှစ်ပွင့် မဟုတ်လား....
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ (၃) ရက် မနက် ၁ နာရီ
ပို့လန်းမြို့၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
သူ့ ကွန်ပြူတာ မော်နီတာပေါ်မှ အစိမ်းရောင် အစက်ကလေးကို အတော်ကြာကြာ သူ ငေးစိုက်ကြည့်နေမိသည်။
မတွေ့စေချင်လို့ ပုန်းနေသည်ကို.... ညီမလေး သိနေလေမည်လား... လှမ်းခေါ်လိုက်ရင် ကောင်းမလား.... စကားတွေ ပြောမိကြရင်လည်း နှစ်ဦးလုံး ထပ်မံနာကျင်ရဦးမည်... စသည် စသည် အတွေးများက သူ့ အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဝေ့၀ဲလွင့်ပျံနေကြသည်လေ...
သည့်နောက်မတော့ ဂျီတော့ခ် ပေါ်မှ သူ sign-out လုပ်လိုက်သည်။ သည်ဂျီတော့ခ်အပေါ် မည်သည့်အခါမျှ သူတက်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
မောက်စ်ကို ကိုင်ထားသော သူ့ညာဖက်လက်ခုံအပေါ် မျက်ရည် တစက်ကျလာမှ သူသည်... ညီမလေးကို အဘယ်မျှထိ ချစ်ခဲ့မိသည်ကို သိပါတော့သည်။
ကဏ္ဍများ ၀တ္ထုတိုများ, ခံစားမိသလိုရေးပါသည်
အပြင်မှာလည်း..နွေနှင်းဆိုတဲ့ Blogလေးရှိတယ် ကိုအောင်သာငယ်။ ဟို.. အစ်ကိုဆရာရဲ့ ညီမလေးတော့ မဖြစ်လောက်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀က သူ..လမ်းတောင် မလျှောက်တတ်လောက်သေးဘူး။
တယ်..ဒီလူကြီး ကိုယ်နဲ့အတူ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ မိန်းကလေးတန်မဲ့ လိုက်လာခဲ့တာတောင် ရှားရှားပါးပါးပိတောက်လေး ပေးဖူးခဲ့တာတောင် ...ဘာမှမဖြစ်ခဲ့လေပဲ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာမှ ပြန်တွေ့ရလေလွမ်းရလေသတည်း ဆိုတာတော့ ဗျာ..ဟဲ.ဟဲ..
၂၀၀၇ မျိုးဆက်က ကလေးတွေကို ပြောပြရင်တော့ လွမ်းကြရလိမ့်မယ် ကျုပ်ကတော့ ဒီလူကြီးတော့ဗျာ ကြံကြံဖန်ဖန် ကာရန်ဆန်တတ်လေတယ်.လို့.မယုံဘူးဗျာ.
တယ်လဲ ကွဲကြေရပါလား။ တကယ်ကြီးလားဟင်။ တော်ကြာ မဟေသီနဲ့ နှောင်ဂျိန်ချနေရအုန်းမယ်။
တော်ကြာ နောက်တစ်ခါ ဆူရှိ မကျွေးမှာလည်းဆိုးတယ်။.....
လွမ်းစရာ...။ဘာလို့ ထွက်ပြေးရတာလဲ အကိုရာ....။
မဟေသီ နဲ့ သားလေးတွေကို သနားတယ်ဗျ
ဒီလိုပါပဲလေ ချစ်ရက်နဲ့ခွဲခွါ.. မခွဲခွါချင်ပေမယ့်
တချက်လေး စောင်းငဲ့ကြည့်ဦး (ကျော်ဟိန်း)
ရန်သူက အဟောင်း... မင်းတို့ ယောက်ယက်ခပ်နေမှုက အသစ်
ခေတ်ပေါ် အချစ်အကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အသစ်